Is your childaPicky eater? What to do if your child isapicky eater? – Pediasure
အစားအစာရွေးတဲ့ကလေးများကို မိဘများသည် ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ။
သင်ငယ်စဉ်က အစားသောက်မျိုးစုံကို ရွေးသည့် အစားရွေးသူအဖြစ်ကြုံဖူးပါတယ်။ သင်သည် အမဲသားကို ကြိုက်သော်လည်း ဘာဂါထဲတွင်ပါဝင်သော ဆိတ် သို့မဟုတ် လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးများကို မကြိုက်ပါက ၎င်းတွင်ပါဝင်သော ခရမ်းချဉ်သီး Ketchup ကိုစားပါက ပြဿနာမရှိပါ။ အစားသောက်ကို စားသောက်ပြီး ဆော့ကစားရခြင်းကို နှစ်သက်ရာကနေ တစ်ချို့အစားအစာများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းအထိ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကလေး၏ ဆာလောင်မှုများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်အထင်အမြင်လွှဲမှားမှုကြောင့် သင့်ကလေးသည် အစားအသောက်များကို ရွေး၍စားသုံးလာကြသည်။ သင့်ကလေးတွင် မည့်သည့်အရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လိုအပ်ပါက လှုပ်ရှားမှုများ၊ လတ်ဆတ်သောအစားအစာများနှင့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ (ဥပမာ Pediasure 3+) ဖြင့် စတင်ဖြေရှင်းပါ။
၁။ အစားစားမည့်အစား ကစားခြင်းကို နှစ်သက်ပါသည်။
အကယ်၍သုံးစွဲရန် စွမ်းအင်များ ကျန်ရှိနေပါက ကလေးသည် အေးအေးဆေးဆေးထိုင်၍ ထမင်းစားရန် ခက်ခဲပါသည်။ တစ်နေ့တာလုံးတွင် ဗိုက်ဆာစေသည့် အပြုအမူများကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ သင်သည်ကလေးကို အရမ်းရိုက်ဖူးပါသလား။ ပြီးခဲ့တဲ့ထမင်းစားချိန်က နောက်ကျခဲ့ပါသလား။ အစားစားချိန်တိုင်းတွင် သင့်ကလေးသည် အလွန်အကျွံစားနေပါသလား။ ကလေးများသည် ကစားခြင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိဘများသည် ကလေးတို့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်မျာကို ဖြတ်၍ ၎င်းတို့လုပ်စေချင်သည့် အရာများကို ဦးစားပေ၍ လုပ်ခိုင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်အချိန်တွင် ဆာလောင်မှုကို လှုံ့ဆော်ရန်၊ အစားအစားစားသောက်သည့်အချိန်ဇယား၊ သရေစာစားသုံးသည့် အချိန်ဇယားများကို သတ်မှတ်ကာ ၎င်းတို့ကို တစ်နေ့တာတွင် လေကောင်းလေသန့်များရရှိစေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို သေချာစွာပြုလုပ်ခိုင်းပါ။ နေ့ဘက်တွင် လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်းသည် အစာအစားသည့်အချိန်တွင် ဗိုက်ဆာစေပါသည်။ အစားအစာတိုင်းတွင် ပရိုတင်း၊ အမျှင်ဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်အေ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများပါဝင်အောင် ကျွေးပါက ကလေးများသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ဗိုက်ပြည့်နေနိုင်ပြီး စွမ်းအင်အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂။ အစာကျွေးမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း/ ရွေးချယ်မှုလွန်ကဲခြင်း။
ကြီးထွားမှုအတွက် အာဟာရ၏အရေးပါပုံကို သိရှိပြီး ကလေးများသည် အစားအစာများကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် မိဘများအတွက် အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ဤဖြစ်စဉ်များသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကလေးများကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ အနံ့အရသာနှင့် အသွင်အပြင်ဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုများ ပြောင်းလဲလာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကြိုက်သည့် အစားအသောက်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သင့်ကလေးတွင် အဖျားရှိပါသလား။ ၎င်းတို့၏ ပါးစပ်နာနေပါသလား။ သွားနှင့် ခံတွင်းစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်ပါသလား။ ထမင်းစားချိန်နှင့် ဆက်စပ်သည့် စိတ်ဒဏ်ရာများ ကြုံဖူးပါသလား။ အစာစားချိန်နှင့် နေရာများကို သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် အစားအစားသည့် အချိန်ကို မိသားစုနှောင်ကြိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။ ကလေးများသည် ၎င်းတို့ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရသည်ကို နှစ်သက်သောကြောင့် ဟင်းချက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့ကို ပါဝင်ခွင့်ပေးပါက ဟင်းချက်သည့်အချိန်ထဲကပင် အစာစားချင်စိတ်များဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရာများကို ပြောပြပြီး ရွေးချယ်ခွင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ဈေးဝယ်ထွက်သည့်အချိန်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါ။ အဓိကသော့ချက်မှာ သင့်ကလေး၏ အကြောက်တရားများ မတိုးပွားစေရန် သင့်ကလေးကို ဖိအားပေးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အစားသောက်များ စားသုံးရန် ငြင်းဆန်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်ကို ဦးစွာဖြေရှင်းပြီး ထမင်းစားချိန်တွင် အစီစဉ်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၃။ အစာစားချင်စိတ်အပေါ်မိဘများ အထင်အမြင်လွဲမှားခြင်း။
ကလေးများသည် ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် ကြီးထွားဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဆာလောင်မှုပုံစံများမှာ မတည်ငြိမ်သေးပါ။ တစ်နေ့တာလုံးတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အဆင်သည် သူတို့၏ဆာလောင်နေမှုတွင် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ဆာလောင်ခြင်း အချက်ပြမှုများနှင့် ဗိုက်ပြည့်ခြင်း လက္ခဏာများကို သင်ယူပြီး ၎င်းတို့ကို အစာကျွေးပါ။ သင်သည့် သင့်ကလေး၏ အစာကျွေးသည့် အခန်းကဏ္ဍကို ထိန်သိမ်းထားပြီး အစားအစာသည့် အချိန်နှင့် သင့်ကလေးမည်မျှစားသုံးသည်ကို မှတ်သားထားပါ။ အချို့ကလေးများသည် အစားအစာများပြားခြင်းကို ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိသောကြောင့် စားသုံးသည့်အချိန်တွင် ထက်ဝက်ခန့်လျော့ချ၍ ၎င်းတို့သည့် ထပ်ခါခါ တောင်းနိုင်ချေပိုများပါသည်။ အတိအကျပြောရလျှင် အစားသောက်ရွေးခြင်းကို မှန်ကန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သင့်ကလေးသည် အစားအစာစားသည်ဖြစ်စေ မစားသည်ဖြစ်စေ ပမာဏများကို သေချာစွာမှတ်သားထားပါ။ သင့်ကလေးအား သင့်တင့်မျှတသော အစားအစာများကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ် တက်ကြွစွာနေထိုင်ရန် အားပေးပါ။ သင့်ကလေးသည် ရိုးရှင်းသော အစားအစာဖြင့် ၎င်းတို့၏အစားအစာရွေးမှုကြောင့် အာဟာရလုံလောက်စွာ မရရှိမည်ကို စိုးရိမ်ပါက Pediasure ကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်စာများသည် ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင် D၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် E နှင့် Probiotics အာဟာရစုစုပေါင်း ၃၇မျိုးကို ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးထားသောကြောင့် အစားရွေးသူများအတွက် ၎င်းတို့ရွေးသောအစားအစာမှ အာဟာရကို ရရှိအောင် ကလေးများကြိုက်နှစ်သက်သော အရသာများဖြစ်သည့်အတွက် ကလေး၏အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ ပျော်ရွှင်သန်မာကြီးထွားလာစေရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့် နာမူနာများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Pediasure Myanmar တွင် ယနေ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Every weekend i used to visit this web page, because i want enjoyment, since this this website conations genuinely pleasant funny material too.
I am glad to seek outalot of helpful information here in the post, we’d like